Jennifer - Tsy fotoana intsony - fanisana amin'ny fanjakana
Jennifer - Tsy fotoana intsony
Jesosy to	Jennifer	ny 24 aogositra 2020:
Anaka, tsy azoko atao intsony ny mitazona ny tanan'ny fahamarinana ho an'izao tontolo izao izay mitady fanitsiana satria very ny fahatsiarovany ny ota ho an'ny olombelona. —Jesus ho Jennifer, 24 aogositra 2020
Nanampy tamin'ny resaka manokana i Jennifer:
Niditra tamin'ny fotoana nampitandremana antsika efa ela isika: "Ny fiangonana mifanohitra amin'ny anti-fiangonana, ny Evanjely mifanohitra amin'ny fanoherana ny filazantsara."(1)
“Miatrika ny fifanoherana farany ataon'ny Fiangonana sy ny anti-fiangonana isika izao, eo amin'ny Evanjely sy ny anti-filazantsara, eo amin'i Kristy sy ny antikristy. Io fifandonana io dia ao anatin'ny drafitry ny Providence Andriamanitra; fitsapana izany ary tsy maintsy raisina ny fiangonana manontolo, ary ny fiangonana poloney manokana. Fitsapana io tsy ny firenentsika sy ny Eglizy ihany, fa amin'ny lafiny iray dia fitsapana ny kolontsaina sy ny sivilizasiona kristiana 2,000 taona, miaraka amin'ny vokadratsiny rehetra amin'ny fahamendrehan'olombelona, ​​ny zon'ny tsirairay, ny zon'olombelona ary ny zon'ny firenena. " —Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), tao amin'ny Kongresy Eokaristia, Philadelphia, PA ho an'ny fankalazana ny faha-roa taonan'ny fanaovan-tsonia ny fanambarana ny fahaleovan-tena; ny fitanisana an'io andalan-tsoratra masina io dia misy ny teny hoe "Kristy sy ny antikristy" toy ny etsy ambony. Diakona Keith Fournier, mpanatrika iray, dia mitatitra izany etsy ambony; cf. Catholic Online; 13 Aogositra 1976[↩]
Posted in Jennifer, Messages, Ny fanaintainan'ny asa.
← Gisella - Tapitra ny fotoana!
Nahoana Ankehitriny? →